QOSKII BASAASKA AHAA: Waxaa dawanka guriga loosoo garaacay xilli aysan filayn (Qaybtii 1-aad) | Hadalsame Media
Home Taariikh QOSKII BASAASKA AHAA: Waxaa dawanka guriga loosoo garaacay xilli aysan filayn (Qaybtii...
(Hadalsame) 04 Nof 2019 – Wargeyska caanka ah ee The Washington Post ayaa mar sii horeysay qoraal lagu daabacay waxaa uu kusoo bandhigay dhacdo basaasnimada la xiriirta oo ay ku kaceen nin iyo xaaskiisa u dhashay dalka Mareykanka waxaana uu ku bilaabay qoraalkiisa sidan:
Bishii Febraayo 21-kedii Sannadkii 1994-kii xili aroor ama subax hore ahayd kuna beegnayd maalin fasax ah ayaa gabadh magaceedu yahay Rosario Ames waxa ay joogtay gurigeeda iyadoo uu wehelinayey wiilkeeda yar ee 5 jirka ah ee lagu magacaabo Paul.
Subaxaasi ninkeeda oo magaciisu yahay Rick waxaa looga yeeray xafiiska hay’ada sirdoonka Mareykanka ee CIA-da oo uu ka ahaan jiray sarkaal ka hawlgala, taasina may ahayn mid caado ahaan jirtay in wakhtiyada fasaxa xafiisku u baahdo sarkaalkan.
Hooyadeed oo ahayd Ms Cecilia, subaxaasi waxay huruday qolka martidda, waxayna ka timmi magalaadda Bogota ee dalka Colombia, iyadoo aad ugu xiistay aragtida inanteeda ama gabadheeda Rosario iyo weliba codsi ay ka dalbatay inanteedu ama gabadheedu inay u timaado.
Markii Jaraska ama gambaleelka Albaabka guriga ee dhinaca waqooyi dhawaqiisu baxay, Rosario waxay ku jirtay qolka hurdada ee dabaqa sare, iyadoo hagaajinaysay, wakhtigaasi may filayn qofna inuu albaabka ku soo garaaco sidii ay ahaan jirtay. Markii uu qofka shaqaalaha guriga u tegay inuu ogaado qofka albaabka garaacaya, Rosario ayaa iyana dabaqa sare ka jaleecday waxayna aragtay inay taagan yihiin nin iyo gabar Uur weyn leh.
Rosario ayaa u soo degtay iyadoo doonayso inay salaanto isla markaana ogaato, markii ay u timmi waxay ka codsadeen inay dibedda ugu soo baxdo.
Labada qof waxay markiiba u sheegeen inay yihiin hawl-wadeenno ka socda xafiiska hay’ada dembi baarista ee FBI. Waxa kale oo ay intaasi u raaciyeen inay xireen ninkeedii iyadoo loo haysto basaasnimo isagoo dal kale sirta Mareykanka u gudbinayey iyadana ay sidoo kale basaasnimo ku tuhmayaan iyo in cashuurta dawladda oo ay khiyaameyeen iyada iyo ninkeedu haddana ay xirayaan sidaasna ay ula socoto.
Rosario cabsi iyo argagax ay is dhaqaajin kari weyday ayaa asiibtay, Waxay rumaysan kari weyday waxa horteeda ka dhacaya. Waxayna ka codsadeen inay raacdo iyadoo wax cabsi ah is gelin. Waxa kale oo ay ku wargeliyeen inay dahabkeeda iska furto oo ay shandada ama boorsada gurigeeda kaga timaado.
Markiiba qolka martida ayay si degdeg uga toosisay hooyadeed iyada oo la socodsiisay inay si dhakhso ah u lebisato iyo weliba in ninkeedii la xiray. Waxa kale oo ay hooyadeed fartay inay guriga iskaga baxaan isla markaana ay kaxayso wiilkeeda yar ee Pual oo ay labadooduba tagaan guriga gabadha ay walaalo yihiin ninkeeda oo aan sidaasi uga fogayn, tilmaamahaasi oo dhan markay bixinaysay waxay ahayd maxbuusad ay barbar taagan tahay gabadha ka socota xafiiska sirdoonka gudaha FBI ee Mareykanka.
Hooyadeed weerahan ama hadalkan aad ayay uga naxaday, maxaa yeelay arrimahan lamay socon xataa in Rosario ninkeeda Rick uu ka sheqeeyo CIA. Rosario ayaa guriga ka soo baxday iyadoo xidhan jaakeet suuf ah. Wiilkeeda yar ee Paul wuxuu isagoo werwersan ku sugayay hoolka, markii ay soo baxday way ku dhegtay oo dhunkatay waxayna u sheegtay inay dadkan raacayso laakiin ay dhakhso u soo noqon doonto. Waxay si xoog leh u xakamaysay nafteeda sidaa awgeed, muu dareemin wiilkeeda yari ilmadeeda.
Gabadha Rosario markii ay dibadda u baxday ee ay albaabka gurigeeda xirtay, waxay ka war heshay in gurigooda ciidan ku wareegsanaa. Gaadiid iyo rag sita qalabka isgaarsiinta ayaa dhinac kasta taagnaa, waddada iyo guriga hareerihiisa waxay ahaayeen sidii goob weerar lagu qaadayo. Gabadha Uurka leh ayaa dhudhunka qabtay waxay u leexisay dhinaca gaarigeeda oo ay saartay, waxayna ku tiri : “Waxba ha werwerin” aniguba hooyo ayaan ahay sidaada oo kale, waan fahansannay, waxa aad ka fikirayso. Haddii aad si degan oo run ah noo caawiso oo noola shaqayso, wiilkaaga yar beri ama maalinta ku xigta ayaad ku soo noqon doontaa.”
Walaal intaas ayaan ku hakinayaa qeybtii koowaad ee warbixintan La soco qaybta labaad beri Insha allah.
Waxaa Diyaariyay: Cabdullaahi Colombo
Previous articleGOOGOOSKA: AC Milan vs Lazio 1-2 (Lazio oo 30 sano kaddib Milan uga badisay San Siro)
Next articleFrank selak, ma aamini kartid inta SHIL ee uu ka badbaaday & sida